Hevitra mandalo resaky ny mpitsimpona akotry: ny filaminana no hany antenaina | NewsMada
Hevitra mandalo resaky ny mpitsimpona akotry: ny filaminana no hany antenaina
Tsy misy vahaolana intsony afa-tsy ny fanaovana fifidianana. Ny fampiatoana ny fanatanterahana azy io mampitatao trangana korontana. Krizy hampitombo fahasahiranana vokatry ny krizy nisesisesy, vesatra tsy ho zakan’ny tsena intsony. Marina fa tsy tena manara-dalàna ara-bakiteny ny fanaovana an’io fifidianana amin’ny 7 novambra io, nefa inona moa no tena azo lazaina ho manaja lalàna eto amin’ ny firenena ? Ny fifanekena amin’ny fahitana marimaritra itsikombakombana no hany sisa fomba fanavotana hierenana amin’ny fitrangan’ny loza. Tsy ho tanteraka vetivety ny famerenana ny fandriampahalemana, noho izany tsy afaka atao ho antony anohanana ny fifidianana izany. Nefa kosa tsy azo atao ambanin-javatra ny filaminana mandritra ny fotoana fampielezan-kevitra, fandresen-dahatra sy amin’ny andro fandrotsaham-bato.
Samy mitebiteby andro aman’alina ny mponina rehetra noho ny tsy fisian’ny fandriampahalemana. Samy mitaky filaminana koa anefa ny vahoaka hahafahany mihaino sy mandinika tsy misy tabataba sy teritery ary avy eo mba hanehoany ny safidiny an-kalalahana. Sahy manao fanamby ny fitondrana mikasika ny fanefany fitandroana filaminana. Arahaba soa, arahaba tsara. Mitehaka ny ambanilanitra ary raha izay no anton’ny safidy dia samy handatsa-bato daholo ho fanambarana ny fahafampo aterak’izany.
Lasa ihany anefa ny saina, raha manjaka moa ny filaminana noho ny fitandroana manara-penitra, tsy ho kely làlana arak’izay ve ny jiolahy sy ireo mpanao asa ratsy isan-karazany ? Izany hoe mitoetra bebe kokoa ny fandriampahalemana ! Inona ary ny antony tsy ametrahana maharitra ny rafitra toy izany fitandroana ny filaminana izany ?
Na heverina aza fa tsy hahatohitra firy ny fahavalo mety hanafika ny Tafika eto an-toerana, ny fanafoanana ny tafika mpiaro ny tanindrazana dia mety haniraka ny hery avy any ivelany hitsapatsapa ny fiarovan-tena. Na eo aza izany, noho izao tsy fisian’ny fandriampahalemana izao dia tsy hay tsy atao ho fahavalom-pirenena ireo dahalo, totakely, jiolahy,… mampihorohoro vahoaka.
Tsy ny miaramila no tsy ampy, ny iraka apetraka aminy no tsy tsara dinika. Hatao inona moa tafika anabakabaka raha fiaramanidina mpiady tokony hampiasainy aza tsy ananany? Hatao inona moa tafika an-dranomasina raha sambo be iray aza tsy misy itetezan’ny miaramila an-jatony ranomasina? Miainga avy any amin’ny vatany ka hatrany amin’ ny manamboninahitra tampony, misy daholo ireo grady rehetra. Vola anie no atokan’ny fanjakana amin’ny fitaizaina an’ireny andian-tafika ireny. An-katerena ny firenena noho ny ady tsy omby tratra atao amin’ny asa ratsy, ireto anefa tafika voataiza amin’ny fanaovana ady, avela fotsiny hijery an’izany arina an-kandrin’ny mpiara-monina izany.